यो हो नि धन कमाउने तरिका, यसरी भए रोडदेखि करोडपतिसम्म…..! « Light Nepal
यो हो नि धन कमाउने तरिका, यसरी भए रोडदेखि करोडपतिसम्म…..!
Published On : 14 January, 2018 7:44 pm
काठमाण्डौ, ३० पुष । सफलता एकैपटक हात पर्दैन । पसिना बगाएर पैसा उमार्नेहरू मिहिनेती हुन्छन् । परिश्रम र संघर्ष गरेर जीवनमा आर्थिक सफलता हात पार्नेहरूका आ–आफ्नै कथा छन् । जुन अरूका लागि पनि प्रेरणा बनिरहेका हुन्छन् । यहाँ परिश्रमीहरूको सफलताका कथा समेटिएको छ । जसले, कुनै दिन सडकपेटीमा श्रम बेच्थे र त्यही पौरखले महल ठड्याएका छन् । विश्वास खड्काथोकीको रिपोर्टः
पुटपाथबाट सुरु भएको बाजेको सेकुवा
संसारमा दुईथरी मान्छे हुन्छन्, टुप्पाबाट पलाउने र भुइँबाट फुल्ने । त्यो यस अर्थमा कि एकथरीले पैसासँग पैसा साटिरहेका हुन्छन्, अर्काथरीले पसिना बगाएर पैसा उमार्छन् । ‘मिहिनेतको फल मीठो हुन्छ’ भन्ने उखानै छ । पसिना बगाएर पैसा उमार्नेहरू तिनै मिहिनेती मानिस हुन् । त्यसो त सफलता एकैपटक हात पर्दैन ।
यसका लागि संघर्ष पनि उत्तिकै गर्नुपर्छ । मिहिनेत,परिश्रम र संघर्ष गरेर जीवनमा आर्थिक सफलता पाउनेका आ–आफ्नै कथा छन् । जुन अरूका लागि प्रेरणाको स्रोतसमेत बनिरहेका हुन्छन् ।
गज्जबको यस अंकमा तिनै परिश्रमी र पौरखीका सफलताका समेटिएको छ । जो, कुनै दिन सडकपेटीमा श्रम बेच्थे र त्यही पौरखबाट कमाएको पैसाले महल ठड्याएका छन् । कामलाई सानो–ठूलो नभनी निरन्तर मिहिनेत गर्ने हो भने जीवनमा एकदिन अवश्य सफल भइन्छ भन्ने सन्देश उनीहरूले दिएका छन् ।
जभन्दा ३७ वर्षअघि एयरपोर्टको चउरमा एउटा फुटपाट सेकुवा पसल थियो । एक कुनामा त्रिपाल बिछ्याइएको हुन्थ्यो र कोइलाको रापमा सेकेर सेकुवा बेचिरहेका हुन्थे, एक अधबैँसे पुरुष । उनले पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म एयरपोर्ट क्षेत्रमै सेकुवा सेकेर गुजारा चलाए । जब सरकारले उनलाई त्यहाँबाट धपायो, त्यसपछि उनले भाडामा सटर लिएर सेकुवा बेच्न थाले । एयरपोर्टको त्यो चउरबाट सुरु भएको सेकुवा अहिले चर्चित ब्रान्ड ‘बाजेको सेकुवा’का रूपमा स्थापित भएको छ ।
ठूलो धनराशि लगानी गरेको व्यवसाय मात्र सफल हुन्छ भन्ने मानसिकतालाई गलत सावित गरिदिएको छ, बाजेको सेकुवाले । ‘बाजेको सेकुवा’मा आज करौडौँको लगानी छ । राजधानीमा १० वटा, पोखरा र चितवनमा एक–एकवटा ब्रान्च छन् । साढे तीन सयजनाभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ, यति चर्चित ब्रान्डको सुरुवाती लगानी जम्मा दुई केजी खसीको मासु र कोइला थियो ।
खोटाङका दिनानाथ भण्डारी करिब तीन दशकअघि काठमाडौं आएका थिए । उनको उमेर करिब ३५ वर्ष थियो । दिनानाथ काठमाडौं आउनुको उद्देश्य थियो, हवाईजहाज हेर्ने । तर, हवाईजहाज हेर्न आएका दिनानाथले एयरपोर्टमै खाजा खाने पसलको अभाव देखे । त्यसपछि उनले सेकुवा पसल खोल्ने योजना बनाए ।
र, एयरपोर्टको चउरमा सेकुवा सेक्न थाले । किन पनि यस्तो योजना बनाए भने गाईघाट र झापामा सेकुवा सेकिसकेका थिए उनले । त्यसैले पनि अर्को व्यवसाय गरेर जोखिम उठाउन चाहँदैनथे ।
एयरपोर्टमा अरू कुनै पसल नभएकाले उनको व्यवसाय दिनप्रतिदिन चम्किन थाल्यो । दिनानाथले स्वादिष्ट सेकुवा बनाउने भएकाले मान्छेहरूको ओइरो लाग्न थाल्यो । ग्राहकले भन्न थाले, ‘बाजेको सेकुवा खान जाऔँ न’ । त्यो ठेला पसललाई ग्राहकले नै बाजेको सेकुवा भनेर नाम दिएका थिए ।
०५२ मा फुटपाथबाट सिनामंगलकै एक सटरमा स¥यो, सेकुवा कर्नर । र, ‘बाजेको सेकुवा’ नाम दिएर त्यहाँ एउटा साइनबोर्ड पनि झुन्ड्याइयो । अहिले बाजेको सेकुवालाई संस्थागत गरिरहेका दिनानाथका छोरा तथा बाजेको सेकुवाका अध्यक्ष चेतन भण्डारी भन्छन्, ‘मेरो बुवाले ढाका टोपी, टीका र दौरा सुरुवाल लगाउने गर्दा ग्राहकहरूले बाजे भन्न थाले । सामान्यतया ब्राह्मण समुदायकालाई बाजे भन्ने चलन पनि थियो । त्यसैले हामीले पनि सबै ग्राहकले भनेझैँ पसलको नाम नै बाजेको सेकुवा भनेर राखिदियौँ ।’ सुरुमा अप्ठ्यारो गरी राखिएको त्यो नाम अहिले चर्चित ब्रान्ड बनेको छ ।
सिनामंगलमा स्थापना भएको बाजेको सेकुवाले ख्याति कमाउन थालेपछि १० वर्षपहिलेबाट विभिन्न स्थानमा ब्रान्च खुलेका छन् । विशेष गरी चेतनले संस्था हाँक्न सुरु भएपछि ब्रान्च पनि खोल्न थालेका हुन् ।
०६० देखि बाजेको सेकुवाले संस्थागत रूप लिएको हो । अहिले बाजेको सेकुवाका एउटा फुडकोर्ट, ५ मदर कम्पनी र ४ फ्रेन्चाइज गरी १० वटा शाखा छन् । एउटा शाखा पोखरा र एउटा चितवनको भरतपुरसम्म पुगिसकेको छ, बत्तीसपुतलीमा उनीहरूको आफ्नै भवन रहेको छ । ‘हाम्रो सेन्ट्रल किचेन कमलपोखरीमा छ, कमलपोखरीमा बनेपछि उपत्यकाभित्र गाडी र बाहिर प्लेनबाट बाजेको सेकुवा परिकार पु¥याउँदै आएका छौँ,’ सिइओ सुशील खड्काले जानकारी दिए ।
उनको अनुसार अहिले मलेसिया र अस्ट्रेलियामा पनि ब्रान्च खोल्ने तयारी भइरहेको छ । मटनबाट यात्रा सुरु गरेको बाजेको सेकुवाले अहिले मटन, चिकेन र अस्ट्रिच मासुको पनि विभिन्न परिकार बनाउँदै आएको छ ।
स्टोभ बनाउने घरबेटी बा
दमौलीका हरिलाल विक ०४८ मा पोखराको सेतीपुलमा असल्ल औँठी फि“जाएर बस्न थाले । उनले सडकमा बिस्कुनजस्तै सुकाएका हुन्थे– कान कोट्याउने कनकर्नु, दारी फाल्ने मेसिन र मालाहरू । तिनै सामानमा आफ्नो भविष्य देखेका थिए, हरिलालले । त्यसैले त उनी जुरुक्क उठेर झोला बोकी डेराबाट निस्कन्थे अनि रात नपर्दासम्म सडकमै पसिना चुहाउँथे ।
बुटवलसम्म पुगेर दुई रुपैयाँमा औँठी बोकेर आउँथे र सडकमा ल्याएर आठ रुपैयाँसम्म पार्थे । सडकमा बस्नेलाई कसले सत्कार गर्ने रु त्यस्ता केही अपमान उनको गुजारा र सपनाअगाडि फिका थिए । उनी श्रमलाई घृणा गर्ने सहरमा श्रमसँग पैसा साटिरहेका थिए । ०७३ मा आइपुग्दा, उनै विकलाई भेट्न तीनतले बिल्डिङको भुइँ तलामा पुगेर घन्टीको स्विच थिच्नुपर्छ । पोखराको नयाँबजारमा अवस्थित उनको निवासमा कोही भाडामा पनि बस्छन् ।
सेतीपुलबाट उठेका हरिलाल आज घरबेटी बा बनिसकेका छन् । राम्रो शैक्षिक संस्थामा सन्तानलाई शिक्षा दिन सक्षम छन् । मन लागेको खानेकुरा र राम्रो लागेको कपडा खरिद गर्न पाउँछन् । तर, उनी जुन स्थानमा आए त्यसको श्रेय सडकलाई जान्छ । किनकि उनी सडकबाटै उठे ।
उनी दुई वर्ष औँठी कुरेर ग्राहक पर्खंदै बसे । उनको गोजीमा दिनमा तीनदेखि पाँच सयसम्म पथ्र्यो । तर, दुई वर्षपछि उनको बाटो मोडियो । ध्यान गयो, स्टोभ र ग्यासचुलो बनाउनेमा । औँठीको व्यापार कम हुनुको विकल्प थियो त्यो ।
त्यसपछि हरिलाल ग्यास–स्टोभ, ग्यास–स्टोभ‘ भन्दै साइकलमा बसेर पोखराको गल्ली चहार्न थाले । कतिले उनलाई भैया, धोती भन्दै गिज्याए पनि, तर कत्ति पनि बिचलित भएनन् । भन्छन्, ‘सुरुको दुई–तीन महिना त लाज भयो । काम गर्दै गएपछि सामान्य नै लाग्न थाल्यो ।’ नेपाली भएर पनि यसरी काम गरेको देखेर कतिले सम्मान पनि व्यक्त गर्थे ।
ग्यास, स्टोभ उनको रोजी–रोटीको राम्रो माध्यम बनेको थियो । दिनमै १२–१३ सय रुपैयाँसम्म जम्मा गर्थे उनी । कहिलेकाहीँ दुई–तीन दिनसम्म सुक्खाराम पनि हुनुपथ्र्यो । कहिलेकाहीँ लुटिन्थे पनि ।
‘म ग्यास स्टोभ बनाउन लामाचौर, लेखनाथ, हेम्जा, पोत्रैदेखि दमौली, स्याङ्जासम्मै पुग्थँ,’ हरिलाल सगौरव विगत सुनाउँछन्, ‘कहिलेकाहीँ उतै पनि बास बस्थ्यौँ । कहिलेकाहीँ त लुटिन्थ्यौँ पनि ।’
०५९ तिर दिउँसो चार बजेकै समयमा लुटिएका छन् उनी । भन्छन्, ‘काउँखोलामा म एक्लै हिँडिरहेको थिएँ । ट्यापे केटाहरू आएर चक्कु देखाए । अनि सबै पैसा लुटेर लगे । सुनसानजस्तो ठाउँमा केटाहरूले धेरैपटक लुटका छन् ।’
उता उनकी श्रीमती सुनिता भने डोकोमा तरकारी बेच्न हिँड्थिन् । श्रीमान्–श्रीमतीको मिहिनेतले मासिक २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ बचत हुन्थ्यो । तर, एकपटक पानी आएर सबै तरकारी कुहाइदिएपछि सुनिता अन्डा व्यापारतिर लागिन् । हरिलालको पैतालाले पनि साइकलको पाउदानी हानिरह्यो । त्यसैले त ०५८ तिर दमौलीमा ६० हजारको जग्गा जोडे ।
०६० तिरबाट उनको साइकलको पाउदानीमा ब्रेक लाग्यो र उनी पृथ्वीचोकको सडकमा कपडा फिँजाएर बस्न थाले । स्टोभलाई ग्यासले विस्थापित गरेपछि उनको व्यापार कमजोर बन्दै गयो र उनी फुटपाथमा कपडा बिक्रीमा गाँसिए । सुनिताले पनि सँगै ग्राहकसँग डिलिङ गर्न थालिन् । ५० हजार रुपैयाँको लगानीमा सुरु गरेको फुटपाथ पसल राम्रैसँग फस्टाउन थाल्यो ।
हरिलालको दुःख भने कम थिएन । उनी बिहान जुरुक्क उठेर कपडा लिन हिँड्थे । सुनिता घरधन्दा सकाएर नौ बजेतिर खाना बोकेर आउँथिन् । सडकमै बसेर खान्थे हरिलाल पनि । उनीहरूले दैनिक तीन हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्न थाले । हरिलाल भन्छन्, ‘प्रायः १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्मको व्यापार हुन्थ्यो । चाडबाडको वेला त चिया खाने फुर्सद पनि हुन्थेन । दिनमै ९० हजार रुपैयाँसम्म व्यापार गरेका छौँ ।’
व्यवसाय राम्रो भएसँगै उनीहरूले ०६२ मा बजारमै १० लाख रुपैयाँबराबरको जग्गा लिए । केही रकम क्यास बुझाए र केही किस्तामा तिरे । अनि ०६६ मा तीनतले घर ठड्याए । ०५९ सालमा उपमहानगरले पुथपाथ हटाइदियो । केही समय उनीहरू मेला–महोत्सवमा समेत कपडा बेच्न हिँडे । पछि सरकारले नजिकैको सरकारी जग्गामा उनीहरूलाई व्यवस्थापन ग¥यो । र, अहिले पनि त्यही कपडा व्यापारमा व्यस्त छन्, हरिलाल–सुनिता ।
अहिले उनीहरूको दिन फिरेको छ । ३० वर्षको उमेरमा औँठी बेच्न सुरु गरेका हरिलाल अहिले ५० पुगे । तर, थाकेका छैनन् । अहिले पनि दैनिक कपडा पसल गइरहन्छन् । उनले पसलमा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी गरेका छन् । दैनिक १५–२० हजार रुपैयाँको व्यापार हुन्छ । यही व्यवसायलाई नै तिरन्तरता दिने बताउँछन्– हरिलाल–सुनिता ।
रत्नपार्कमा कपडा बेच्ने बिजनेसम्यान
बुद्धिबहादुर कार्कीलाई आज कुनै दुःख छैन । काठमाडौंमा तीनवटा घर छन् । छोराछोरी राम्रो कलेजमा पढ्छन् । समाजमा राम्रो छाप छ । पैसाकै कारण कुनै काममा अड्कनुपर्दैन । उनको बानेश्वरमा ठूलो सप्लायर्स छ, काठमाडौं सप्लायर्स । दिनमा पाँच सय केजीभन्दा बढी मासु बेच्छन् ।
उनीबाट होलसेलमा मासु खरिद गर्नेहरू निकै धेरै छन् । आफ्नै भ्यानमा सप्लाई गर्छन् । प्रोफेसनल भाषामा भन्दा, उनी राम्रो बिजनेसम्यान हुन् । उनी सजिलै यो स्थानसम्म आइपुगेका होइनन् ।
यहाँसम्म आइपुग्नका लागि उनले कहिले इँटा उचालेका छन्, कहिले साग व्यापार गरेका छन्, कहिले रत्नपार्कमा पुगेर कपडा व्यापार गरेका छन् भने कहिले असनका गल्लीमा हाइनेक र ट्राउजर समाएर पैताला खियाएका छन् ।
बुद्धिबहादुरले ०४६ सालमा एसएलसी पास गरे र नौ महिना गाउँकै विद्यालयमा अध्यापन गरे । तर, जब उनी उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आए, त्यसपछि भने उनी संघर्षको मैदानमा होमिए । दुई छाक टार्नका लागि उनले जुनसुकै काम पनि गर्न बाँकी राखेनन् ।
महाराजगन्जको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्न पुगेका बुद्धिबहादुरको पहिलो काम थियो घर ढलान । उनी दिनभर ढलानको काम गर्थे र बेलुकी कोठा फर्कन्थे ।
सिमेन्ट बालुवा मुछ्थे, कराहीमा सिमेन्ट हालेर दिन्थे, अहिलेजस्तो प्रविधिको विकास नभइसकेको भए तापनि त्यतिवेला ज्यामी काम गर्नका लागि निकै कष्टप्रद थियो । तर, दिनभरको काम गरेर उनी ४० रुपैयाँ गोजीमा हाल्थे र कोठा फर्कन्थे ।
उनी काठमाडौंका सहरसँग परिचित हुँदै थिए । त्यसैवेला उनी रत्नपार्कसँग परिचय गर्न पुगे । रत्नपार्कमा पुगेर मोजा, बच्चाहरूको कपडा बेच्न थाले । फुटपाटमै आफ्नो जीवनलाई होम्दै थिए उनी । भन्छन्, ‘ज्यामी काम गरेर जम्मा गरेको चार हजार रुपैयाँले मोजा कपडालगायतका सामान खरिद गरेर बेच्न थालेको थिएँ ।’ त्यहाँ उनको कमाइ पनि राम्रै हुन थाल्यो । भन्छन्, ‘नौ रुपैयाँमा लिएको मोजा ४० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्थ्यो । दिनमै दुई हजार २२ सय रुपैयाँसम्मको कमाइ गरिन्थ्यो ।’
करिब नौ महिनापछि उनको व्यवसायमा ठूलो अवरोध खडा भयो । सरकारले रत्नपार्कमा डोजर लगायो, जसका कारण उनी त्यो व्यवसायबाट विस्थापित हुन पुगे ।
त्यसपछि पनि उनले ज्यामी कामलाई निरन्तरता दिए । सामान्य खालको ठेक्कासमेत लिएर काम गर्न थाले । उनको भाइ काठमाडौं आइसकेपछि भने रत्नपार्कले दिएको ६० हजार रुपैयाँले किराना पसल सुरु गरे । विडम्बना १ त्यो व्यवसाय फस्टाएन । अनि हात हाले, मासु व्यापारमा । त्यतिवेला मासु काट्नेलाई कसाई भन्थे । ब्राह्मणले मासु छुनुहुँदैन भन्नेसम्मको मान्यता स्थापित थियो । तर, त्यो मान्यतालाई बुद्धिबहादुरको पेट सिद्धान्तले इन्कार ग¥यो ।
उनले ०५२ मा थापागाउँको खुला आकाशमुनि बसेर मासु काट्न थाले । त्यहाँबाट राम्रो आम्दानी हुन थाल्यो । उनी भन्छन्, ‘सुरुमा त्यस्तै २०–३० केजी मासु बिक्थ्यो । महिनामा १५ सयभन्दा बढी आम्दानी हुन्थ्यो । ०५५ सालदेखि त धेरै राम्रो हुन थल्यो ।’ पेसाका कारण कहिलेकाहीँ बहिष्करणमा पनि परेका छन्, बुद्धिबहादुर । भन्छन्, ‘एकपटक पण्डितले टाँगासमेत बाँधिदिएन मलाई ।’ यस्ता अनेक घटनालाई नजरअन्दाज गर्दै आफ्नै व्यवसायमा केन्द्रित भए उनी । लगनशीलताले उनलाई राम्रो प्रतिफल दियो । जसका कारण ६१ सालमै अनामनगरमा ३५ लाख रुपैयाँको चारआना जग्गा किन्न सफल भए ।
त्यो जग्गा बिक्री गरे र ०६८ मा मासु पसल गरेकै जग्गा खरिद गर्ने हैसियत बनाए । जुन जग्गा उनले एक करोड ९७ लाख रुपैयाँमा किनेका थिए । त्यो घर खरिदमा तत्कालीन किस्ट बैंकको ऋणले पनि धेरै सहयोग ग¥यो । त्यही जग्गामा अहिले उनको भव्य महल छ । हाल पनि कामप्रतिको उनको धारणा उस्तै छ । प्रायः उनी मासु काटेर बेचिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् । ४५ वर्ष पुगेका उनी बिहान ४ बजे उठेर संघर्ष गर्छन् । आफ्ना धेरै दाजुभाइ भएकाले परिवारले नै धानेको छ उनको सप्लायर्स । उनी भन्छन्, ‘मान्छे सफल हुनका लागि पैसा होइन, इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।’
पत्रिका र बदाम बेचेर लाजिम्पाटमा घर
ओखलढुंगाका चित्रकुमार खड्कालाई पनि बदाम र पत्रिकाले माथि पु¥याएको हो । कुनै समय हातमा बदाम र पत्रिका लिएर हिँड्ने चित्रकुमार आज सम्पन्न बनेका छन् । चित्रकुमारको ०५४ सालदेखिको संघर्षले लाजिम्पाटमा बिल्डिङ ठडिएको छ । हिजो काठमाडौंमा ६ जना एउटा कोठामा कोचाकोच गरी बस्ने उनी आज सानका साथ आफ्नै निवासमा बस्छन् र व्यापार गर्छन् ।
०५० मा एसएलसी पास गरेपछि उनले दुई वर्ष गाउँमै अध्यापन गरे । अनि ०५४ सालमा काठमाडौं छिरे । त्यतिवेला काठमाडौंसम्म आउन पनि कम्ती सकस थिएन । आधा बाटो त उनले हिँडेरै पार गरे ।
पढ्न भनेर काठमाडौं आएका चित्रकुमारलाई अभावले पढ्न दिएन । बरु, छाक टार्नका लागि पत्रिका बेच्दै हिँडे । केही समयपछि उनी सरस्वती क्याम्पसमा भर्ना भए । बिहान क्याम्पस जाने उनी दिनभर पत्रिका हातमा लिएर कराउँथे, ‘आयो सन्ध्याकालीन ताजा खबर, ताजा खबर‘ ।’ पत्रिका हल्लाउँदै उनी पुतलीसडक, नक्साल, सरस्वती क्याम्पस, लैनचौर, लाजिम्पाटलगायतका सडकमा भौँतारिन्थे । एक वर्ष उनको दैनिकी त्यसरी नै बित्यो । भन्छन्, ‘एक रुपैयाँमा पत्रिका लिएर दुई रुपैयाँमा बेच्थ्यौँ । दिनमा त्यस्तै ५०–६० वटा पत्रिका बिक्री हुन्थ्यो ।’
उनी सधैँ पत्रिका बेचेर बसेनन् । बदामतर्फ फड्को मारे । पत्रिकाभन्दा बदाममा फाइदा देखे चित्रकुमारले । त्यतिवेला उनलाई राम्रो कामभन्दा पनि पैसा चाहिएको थियो ।त्यसैले उनी बानेश्वरमा बसेर दिनभर बदाम बेच्न थाले । जाडोको समयमा बदाम फिँजाएर बस्थे र गर्मीमा तरकारी । उनी मीनभवन, बानेश्वर, बिजुलीबजार, सूर्यविनायकसम्म डालीमा बदाम लिएर घुम्थे ।
त्यतिवेलाको रमाइलो किस्सा सुनाउँछन् चित्रकुमार, ‘मीनभवनमा माथिबाट बोलाएर बदाम पु¥याउन गएको थिएँ । मलाई बदाम लिएर बोलाउने त सँगै क्याम्पस पढेको साथीकी श्रीमती पो रहिछिन् १ म त्यो कोठामा पस्नै सकिनँ । लुकेर भागँ ।’ उनको जीवनसँग गाँसिएका यस्ता थुप्रै अनुभूति छन् ।
गर्मी मौसममा तरकारी बेच्न पनि छोडेनन् उनले । बिहानै ४ बजे उठेर उनी कालिमाटीबाट तरकारी ल्याउँथे । अनि फुटपाथमा बसेर बेच्न थाल्थे । त्यो पेसा पनि एक वर्षभन्दा बढी टिकेन । उनले बुद्धिबहादुरको मासु पसलमा मासु काट्न थाले । ०५६ सालबाट त लाजिम्पाटमा आफ्नै मासु पसल सुरु गरे ।
खाली जग्गा लिएर उनले मासु पसल सुरु गरेका थिए । व्यवसाय सुरु गरेको एक महिनापछि बाँसमा पाल अड्याएर पसललाई केही व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरे । मासु पसल पनि राम्रै चल्दै गयो । त्यहाँबाट उनले दिनमा दुई–तीन सय रुपैयाँ आम्दानी गर्न थाले । ०६२ सालमा त उनले भाडाको जग्गालाई आफ्नो बनाए । ०६५ मा ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर निवास नै खडा गरे ।
अहिले उनले एउटा भाइलाई जापान पठाएका छन्, छोरीलाई बिएस्सी स्टार्फ नर्स पढाउँदै छन् भने अन्य पारिवारिक सदस्यलाई पनि राम्रै शिक्षादीक्षा दिएका छन् । उनलाई उठाएको मासु पसल अहिले पनि छाडेका छैनन्, उनले । साथमा तीनवटा ब्रान्डको ग्यासको डिपो लिएका छन् र सँगसँगै पानीको पनि व्यापार गर्छन् ।
साग व्यापारदेखि उपसचिवसम्म
ओखलढुंगा गाम्नाङटारका तीर्थराज भट्टराईको घरअगाडि प्रधानाध्यापकको घर थियो । उनको घरमा जिल्लाबाट माथिल्लो ओहोदाका मान्छेहरू आइरहन्थे । एकपटक घोडाको लगाम समाउँदै एकजना मान्छे आए र तिनै प्रधानाध्यापकको घरअगाडि रोकिए ।
घोडावाल थिए– जिल्ला शिक्षा अधिकारी । अर्को दिन त्यो घोडा देखेपछि उनकी आमाले तीर्थराजतर्फ फर्कंदै भनिन्, ‘मेरो छोरा यस्तै घोडा चढ्ने होला कि नहोला रु’ जतिवेला तीर्थराज दुई कक्षामा अध्ययन गर्थे ।
आमाले भनेजस्तै अहिले तीर्थराज घोडा नभएर गाडी नै चढ्ने भइसकेका छन् । सडकबाटै संघर्ष गरेर उनी यो अवस्थासम्म आइपुगेका हुन् । उनको जीवनको सफलतासँग कतै न कतै उनको आमाको वाणीले पनि हक राखेको छ ।
तीर्थराज निम्नवर्गीय परिवारमा हुर्किए । आफ्नो जमिनमा उब्जिएको अन्नले वर्षदिन धान्न धौ–धौ पथ्र्यो, उनको परिवारलाई । स्कुल जानुपूर्व र स्कुलबाट फर्किएपछि उनको नियमित ड्युटी थियो, एक भारी घाँस–दाउरा ल्याउने ।
उनी सधैँ चप्पल पड्काउँदै विद्यालय पुग्थे । एसएलसी सकाएर उनी ०५० मा काठमाडौं उक्लिए । उतिवेला दुई दिन पैदल र एक दिन गाडीमा चढेर काठमाडौं
आएका थिए, तीर्थराज । काठमाडौंमा उनका काका बस्थे, जो रेडियो नेपालमा जागिर गर्थे । उनैसँग बस्न थाले तीर्थराज । तर, खाने बाटो गर्नुपर्ने भयो ।
उनका काकाले चप्पल फ्याक्ट्रीमा काममा लगाइदिए । त्यसपछि १६ वर्षीय कलिलो उमेरका तीर्थराजले चप्पल फ्याक्ट्रीमा हातपाखुरा बजार्न थाले । धुम्बाराहीमा रहेको चप्पल फ्याक्ट्रीमा उनले नगर्ने कुनै काम थिएन, बोरा बोक्नेदेखि चप्पल बनाउनेसम्मको काम गर्थे उनी । तर, दुई महिनापछि उनी झाडापखालाले थलिए । त्यसपछि कामै छोडिदिए । भन्छन्, ‘त्यतिवेला मासिक ६–७ सय रुपैयाँ कमाइ हुन्थ्यो ।’
उनलाई केही न केही गर्नु थियो । क्याम्पसमा भर्ना हुने र उच्च शिक्षा हासिल गर्ने चाहना त छँदै थियो । त्यसैले कसरी हुन्छ पैसा जम्मा गर्ने जुक्तिमा थिए उनी । त्यतिवेलै उनको मस्तिष्कमा क्लिक भयो, ‘साग व्यापार ।’
०५० तिरै उनले लगनखेलको सडकमा साग व्यापार गर्न थाले । भन्छन्, ‘गाउँबाट ल्याएको भारीका भारी साग खरिद गथ्र्यौँ र बेच्थ्यौँ । एक मुठा सागमा ५० पैसा नाफा हुन्थ्यो ।’ दिनमा औसत ५० रुपैयाँ आम्दानी गर्थे उनी ।
कहिलेकाहीँ सडकमा बसेर दुई–तीन भारी साग पनि बेचिरहेका हुन्थे । बिक्री भएको सागको मुठामुठामा अध्ययन गर्ने सपनाको गन्ध थियो, सायद । दुई महिनासम्म सडकमा साग बेचेर बचत गरेको रकम बोकेर उनी पाटन क्याम्पस पुगे । र, नेपाली र जियोग्राफी विषय पढ्न थाले ।
पाटन क्याम्पसमा भर्ना भएसँगै उनका लागि रोजगारीको नयाँ बाटो खुल्यो । काकाकै माध्यमबाट एक विज्ञापन एजेन्सीमा काम गर्न थाले । त्यतिवेला उनी साथीहरूसँग असनलगायतको क्षेत्रमा पत्रिका बिक्री गर्न पनि हिँडेका थिए ।
विज्ञापन एजेन्सीमा काम गर्दै जाँदा तीर्थराजलाई राम्रो हुन थाल्यो । त्यतिवेला देशमा त्यति धेरै पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनहरू थिएनन् । र, पनि उक्त विज्ञापन एजेन्सीले राम्रो आर्थिक ट्रान्जेक्सन गर्न थाल्यो । जसको कारण उनी नौ वर्षसम्म त्यही विज्ञापन एजेन्सीमा काम गरे । भन्छन्, ‘पछि त म त्यो एजेन्सीको म्यानेजर नै भएँ ।कम्पनी वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढीको आर्थिक ट्रान्जेक्सन गर्ने भइसकेको थियो ।’ त्यही एजेन्सीमै काम गरेर उनले भूगोलतर्फबाट मास्टर्स पनि सकाए । उनले ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याएर मास्टर्स सकाएका थिए ।
०५८ सालमा बिहे गरेर ससुराली गएका तीर्थराजले त्यहाँ फरक अनुभूति गरे । उनको ससुराली गाउँ लमजुङमा सरकारी जागिरे नभएको घर भेट्टाउन गाह्रो थियो । त्यसले उनलाई पनि सरकारी जागिरप्रतिको मोह जगाइदियो ।
त्यसपछि आफू पनि अफिसर बन्ने अठोट लिए, तीर्थराजले । उनले जागिर नै छाडेर पढ्न थाले । सर्ट लिस्टमा नाम पनि निस्कियो । त्यसपछि पढाइमा नै जोड दिन थाले । भन्छन्, ‘राति जतिवेला निद्राले छाड्यो त्यतिवेला नै अध्ययन गर्ने गर्थेँ ।’
एक दिनको कुरा हो, तीर्थराजको एकजना साथी बिहान ४ बजे नै ढोका ढकढक्याउन आइपुगे । तीर्थले ढोका ढकढक्याएको नसुनेपछि ती साथी वल्लो घरबाट झ्याल ढकढक्याउन पुगेका थिए । त्यतिवेला तीर्थले लोकसेवाको रिजल्ट आएको सपना देखिरहेका थिए ।
जब तीर्थराजले ती साथीलाई भेटे त्यसपछि उनीमा खुसीको सीमा नै रहेन । ती साथीले गोरखापत्र बोकेर आएका थिए । अधिकृतको रिजल्ट थियो गोरखापत्रमा । जहाँ तीर्थराजको नाम पनि अटाएको थियो । उनले अन्तर्वार्तामा पनि नाम निकाले अनि गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा पोस्टिङ भए ।
त्यतिवेला देशमा संकटकाल थियो र देशको सम्पूर्ण शासनसत्ता तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा लिएका थिए । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीचको द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा थियो । त्यसै जिल्लाका सिडिओलाई माओवादीले हत्या पनि गरेका थिए । त्यहीँ रहेर उनले चार वर्ष काम गरे । उनलाई माओवादीबाट ठूलाठूला धम्की पनि नआएका होइनन् । तर, कुशलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे तीर्थराजले ।
त्यसपछि उनले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौँडा, केन्द्रीय कारागार काठमाडौं प्रमुख, जिल्ला विकास समिति काठमाडौंमा स्थानीय विकास अधिकारीको रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरे । अहिले उनी स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उपसचिवको रूपमा कार्यरत छन् । उनले कलंकीमा आफ्नो निवास पनि बनाइसकेका छन् । तर, उनीमा पढाइको भोक अझै मरेको छैन । ४० वर्षीय तीर्थराज एमफिल गर्दै छन् भने सहसचिवको तयारीमा पनि जुटेका छन् ।
होटेल छोडेर ठेला व्यापार
१५ वर्ष पहिले सुभद्रा थापाको आफ्नै होटेल थियो । त्यसभन्दा पहिले असनमा किराना पसल । उनले राति अबेरसम्म होटेल खोल्न नपाउने भएपछि पेसा परिवर्तन गरिन् । होटेलबाट फुटपाथमा झरिन् । जब फुटपाथमा आइन्, त्यसपछि निकै रमाइलो लाग्न थाल्यो उनलाई ।
बेलुकी ५ बजे घरबाट बागबजारस्थित तरकारी बजारछेउ पुग्छिन् उनी । त्यसपछि ठेलामा असरल्ल नेवारी आइटम फिँजाउँछिन्, ग्राहकको अर्डरअनुसार खानेकुरा तयार पार्दै पस्कँदै गर्छिन् । अनि १० बजेपछाडि मात्र फर्कन्छिन् । ग्राहकको भिड पनि उस्तै । पैसा समाउनेसम्म फुर्सद हुँदैन उनलाई । भाइ सानु कपालीले सघाउँछन्, सुभद्रालाई ।
६ हजारमा सानो ठेला लिएर १५ वर्षपहिले उनी बागबजारको चोकमा बस्न सुरु गरिन् । जम्माजम्मी १५ हजारको लगानी गरेकी थिइन् सुरुमा । दिनहरू बित्दै जाँदा व्यापार पनि उस्तै गरी बढ्न थाल्यो । मुसुक्क हाँस्दै भन्छिन्, ‘रमाइलै छ ।’यसकारण उनको अनुहारमा मुस्कान छाएको छ कि १० वर्ष पहिले हुने ५÷७ हजारको व्यापार बढेर अहिले १५ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । ठेलामै उनी दैनिक ७÷८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आम्दानी गर्छिन् ।
काठमाडौंकै रैथाने भएकाले पनि उनलाई सहज छ । यही पेसा गरेर छोरालाई होटेल म्यानेजमेन्ट पढाएकी छिन् । जो अहिले साउदीमा पुगेर ‘रियल’ फलाइरहेका छन् । ४८ वर्षीय सुभद्राले कहिले भुटन तयार पारिरहेकी हुन्छिन्, कहिले खागो, बारा, ससेज, चिकेन रोस्ट फ्राई गरिरहेकी हुन्छन् । भाइ सानुकान्छाले मःम झिक्दै दिँदै गरिरहेका हुन्छन् । उनका श्रीमान् ड्राइभिङ गर्छन् । सुभद्राले यो व्यवसायको विकल्प पनि कहिल्यै सोचेकी छैनन् । भन्छिन्, ‘मेरै आँट, साहस र मिहिनेतले सुरु गरेको पेसा हो । यसैमा आनन्द छ ।’
गाडीले डुबायो, फुटपाथले उठायो
जीवनमा मान्छेले अनेक योजना तय गरेका हुन्छन्, आफूअनुकूलको सपना देखेका हुन्छन् । र, त्यो सपनालाई पूरा गर्न संघर्षको यात्रामा दौडन्छन् । तर, जीवनमा सधैँ सोचेअनुरूपका सफलता हाँसिल हुँदैन । कहिलेकाहीँ जीवनले मान्छेलाई नै अचम्मित पार्ने गरी नयाँ आधारशीला खडा गर्दिन्छ वा सोच्दै नसोचेको काम गर्न बाध्या परिदिन्छ । जुन अनुभव छ विश्व बडालसँग ।
उनी गाडीको व्यवसायमा लागे । संघर्ष पनि खुबै गरे । तर, मिहिनेतले मात्र मान्छे सफल हुँदो रहेनछ । उनले १८ लाख रुपैयाँ डुबाए । अनि उनीसँग विकल्प फु¥यो रत्नपार्कमा कपडा व्यापार गर्ने । बडाल एकजनासँग बिन्ति गर्न पुगे, ‘तपाईंको कपडा बेचिदिन्छु । जति व्यापार हुन्छ तिर्छु, नाफा म राख्छु ।’ यसरी करिब एक वर्ष रत्नपार्कमा बिताए बलामीले । आम्दानी पनि राम्रै हुन थाल्यो । महिनामा ५०÷६० हजार नै आम्दानी गर्न थाले । त्यसपछि उनी इन्द्रचोकमा पुगे । त्यहाँ पनि निकै राम्रो व्यवसाय हुन थाल्यो ।
उनले महाबौद्धबाट फेन्सी आइटम ल्याउँथे र सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्थे । अहिले उनको सिनारियो चेन्ज भइसकेको छ । पाँच वर्षको अवधिमा सबै ऋण चुक्ता गरिसकेका छन् । न्युरोड र बांगेवडामा फेन्सीपसल सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
पार्वती दाहाल एउटा छोरी लिएर पुतलीसडकको एक गल्लीमा बस्छिन् । उनको ठेला फलफूलका भेराइटीले सजिएका छन् । फुटपाथमा बसेर फलफूलमै आफ्नो भविष्य खोजिरहेकी छिन् । रोजीरोटी जुटाइरहेकी छिन् । उनले ७ वर्षपहिले घाँस काट्ने, भैँसी पाल्ने, खेती गर्ने पेसा छाडेर काठमाडौं छिरिन् । र, तरकारीसँगै जिन्दगी बिताउन थालिन् । आजसम्म पनि उनको दिनचर्या उस्तै छ । काठमाडौंको एउटा घरमा डेरा लिएर बस्छिन् ।
खाना खाइवरी १० बजे ठेला घचेट्दै सडकमा आइपुग्छिन् अनि साँझ ८ बजेतिर घर पुग्छिन् । उनी एउटा छेउमा तरकारी बेचिरहेकी हुन्छिन् भने अर्कोछेउमा उनका श्रीमान् प्रेमप्रसाद चाटपटे मोलिरहेका हुन्छन् । दैनिक एक हजारसम्मको आम्दानी हुने पार्वती बताउँछिन् । तर, उनीसँग खुसीका मात्र होइन, दुःखका पलहरू पनि निकै छन् । सडकमा काम गर्दा विभिन्न अप्ठ्यारो त आइहाल्छ । कतिपयले भने प्याच्च नराम्रो पनि भनिदिन्छन् रे । भन्छिन्, ‘तर, यी सबैको मतलब गर्दिनँ ।’
सबैभन्दा समस्या त नगरपालिकाले पो पारेको छ उनलाई । भन्छिन्, ‘नगरपालिकाका प्रहरी देखेपछि भागिहाल्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ सबै खोसेर लगिदिन्छन् ।’ तर, आफूलाई यही व्यवसायमा आत्मसन्तुष्टि भएको बताउँछिन् पार्वती ।
जुत्ता सिलाउने नेता
महोत्तरी सुन्दरपुरका सेवक राम सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । राजधानीमा आयोजना हुने विभिन्न फोरम र दलितसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा भाषण पनि दिन्छन् । दलित अधिकारकर्मीका लागि बढ्ता परिचित हो ‘सेवक राम’ नाम ।
राजनीतिबाट चिनिएको सेवक रामको पेसा कसैले थाहा पायो भने ऊ टोक्न बाध्य हुन्छ । त्यो किनभने उनले बागबजारका सडकमा बसेर जुत्ता सिलाइरहेका हुन्छन्, पालिस गरिरहेका हुन्छन् ।’ उनलाई आफ्नो पेसाप्रति कुनै खेद छैन र कुनै पश्चात्ताप पनि । बरु रोजीरोटी जुटाउन सहयोग गरेकोमा पेसालाई नै सलोट गर्छन् । भन्छन्, ‘राजनीति गरे पनि कुनै न कुनै व्यवसाय त चाहियो नि ।’
०५७ मा सेवक रामले पार्टीको सदस्यता लिएका थिए । तर, त्योभन्दा अगाडि पनि राजनीतिको उनको रुचि नभएको होइन । राजनीतिमा चासो राख्ने सेवक रामको जुत्ता पालिस पेसा भने २५ वर्ष पुरानो हो । २५ वर्षदेखि उनले निरन्तर मान्छेहरूको जुत्ता पालिस गरिरहेका छन् र मान्छेहरूलाई नै पाठ सिकाइरहेका छन् । श्रमप्रतिको पाठ । सुरुमा त उनले स्टाफ, ग्यास बनाउने काम पनि गर्थे । पछि विस्तार जुत्तामा मात्र केन्द्रित हुन थाले । आठ कक्षा पास गरेका सेवक राम साथीको लहलहैमा काठमाडौं छिरे ।
उनका साथीहरूले जुत्तासम्बन्धी नै काम गर्ने भएकाले उनको यही पेसा बाध्यता बन्न पुग्यो । दैनिक पाँच सय रुपैयाँदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने सेवक राम यो पेसा छाड्ने मनस्थितिमा छैनन् ।
महिला क्रिकेट टिमलाई बधाई, इन्डोनेसियालाई फराकिलो अन्तरले हराउँदै नेपाल पुग्यो फाइनलमा
काठमाडौं, ४ माघ । नेपालले इन्डोनेसियालाई ९२ रनले पराजित गर्दै टी–२० म्स्याश क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा
रविन्द्र मिश्रको पत्रको जवाफ यसरी दिए उज्जवल थापाले, विज्ञप्ती मार्फत सार्वजनिक गरे आफ्नो धारणा
काठमाडौं, ४ माघ । विवेकशील साझाबाट फुटेको विवेकशिल नेपाली दलले डा गोविन्द केसीको अनसनका सम्बन्धमा
परासी, केराखेतीबाट मनग्य आम्दानी
परासी, ४ माघ । सुस्ता गाउँपालिका–४ नर्सहीकी आशमाया गुरुङ प्रायः केराघारीमै भेटिनुहुन्छ । विगत सात
नेपाली कांग्रेसका नेता पौडेलले दिए चुनौती, अब कांग्रेसले सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउछ
चितवन, ४ माघ । नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अब सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन
महिला क्रिकेट टिमलाई बधाई, इन्डोनेसियालाई फराकिलो
रविन्द्र मिश्रको पत्रको जवाफ यसरी दिए
नेपाली कांग्रेसका नेता पौडेलले दिए चुनौती,
आफुलाई छोडेर गएका उज्जवल थापालाई रविन्द्र